I-Pgaffs yokufa ngokukhawuleza kakhulu kwiPGA Tour
Iirekhodi zePGA Tour: IiPlaffs kunye nabaninzi abadlali
Iyiphi inani elikhulu labagadi begolfu abaye bathatha inxaxheba ekutshatyalaliswa ngokukhawuleza kokufa kwi- PGA Tour tournament? Le ngxelo inesithandathu, kwaye kwenzekile kabini:
6 Abagadi beGoli kwiLinye lePlaff
1994 IGTE Byron Nelson Classic : uNeal Lancaster, uTom Byrum, uMarko Carnevale, uDavid Edwards, uJoshinori Mizumaki noDavid Ogrin. Umnqobi: uNeal Lancaster
Ngo-2001 iNissan Open : uRobert Allenby, uToshi Izawa, uBrandel Chamblee, uBob Tway, uJeff Sluman noDennis Paulson. Ophumeleleyo: uRobert Allenby
I-Lancaster ka-Byron Nelson Classic Victory
Umntu wokuqala o-6 owake waphuma kwiPGA Tour ngo-1994 kwi-Byron Nelson Classic. Kodwa le nto ayizange yenzeke ngenxa yokuba abagadi begalufa abathandathu beboshwe ekupheleni kweemingxuma ezingama-72. Kwaye kwenzeka ngenxa yokuba isimo sezulu esinesibhakabhaka sathintela ukuba umdlalo ungagqiba ngaphezu kwembini. Ngoko iinqwelo zegalufa ezi-6 zaziboshwe emva kweemingxuma ezingama-36 , kwaye zanciphisa i-hoyoff. (Lo ngumcimbi wokuqala we-PGA Tour ukususela ngo-1985 ukuba kuphela ukuya kwizimbobo ezingama-36.)
Yaye nangona i-golfers ezintandathu zalapho, zaphela ngokukhawuleza: I-playoff yahlala yodwa. I-Lancaster yayinqoba ngo-4-foot- birdie putt kwisibini sokuqala esongezelelweyo.
I-Lancaster yayisetyelelwe iinyanga ezihlanu kwaye yayingazange iphinde iphele phezulu kunesihlanu indawo. Le yinto yokuqala yokuphumelela ... kwaye yahlala yodwa.
Nqoba yaseNissan Open Open
Ingqungquthela yesibini yesi-6 kwimbali yePGA Tour yenzeke kwi-Nissan Open ka-2001 kwi- Riviera Country Club , i-tournament eyaziwa ngokuba yiLos Angeles Open kwaye namhlanje ibizwa ngokuba yi- Northern Trust Open .
Kwaye njengoLancaster ekuphumeleleni kumntu wokuqala wokuqala-6, u-Allenby waphela lo mgobo wokuqala. U-Allenby washaya i-3-inkuni ukuya kwiikubhite ezintlanu zekomityi kwisibini sokuqala esongezelelweyo, wada wangcwina i-birdie ukuba ifune ukunqoba. Ngelo xesha kwakukho ukunqoba kwe-PGA Tour ye-Allenby yesithathu kunye nabo bonke abathathu babephumelela nge-playoffs.
Umntu oneminyaka engama-6 uqhubekile ngenxa yokuba abadlali abaningana aba nethuba lokuphumelela ngqo-kuquka u-Allenby-bakhubeka phantsi. UDavis Uthando III okhokelwa enye kunye nemingxuma emine yokudlala, kodwa wadlala loo miqolo emine ehleliyo e-4-ngaphezulu kwaye ilahlekile. U-Allenby noJeff Sluman bobabini bahlawula umgobo we-18 kumgaqo-siseko, bebuyele kwi-tie e-6.
Lo mqhudelwano wagqiba kubanda, kwimozulu emanzi, kwaye enye enye i-golfer kwi-playoff - u-Bob Tway - ulungele ukufikelela kwi -4 , 18th hole in two. I-Tway yayinama-35 -enyawo ukusuka kwindebe kwaye yafika imfutshane nje.
Iirekhodi ezinxulumene: Ixesha elide kuninzi lokufa ngokukhawuleza kwimbali yePGA Tour
Iingcebiso zokufundisa abantwana ukuthandaza
Yintoni iProdium Training ku-Gymnastics?
I-Knox College Admissions
Biography kaJamie Ford
Ukuhlangana Okumangalisayo Neengelosi
Ukusetyenziswa kweLwimi ukwenza
I-Pumped and Flash Pump
Thumela imiyalezo ye-imeyile (kunye neenkcukacha) Ukusebenzisa iDelphi & Indy
Spondylus: I-Precolumbian Use of Oyster Thorny